Top 4 Lugood Alternative Software u Android
1. Lugood App u Android
Sidaas aad newbie ah ee Android madal ka dib ka baaraandegaya macruufka, iyo raadinayso software ah sida Lugood si ay u caawiyaan si fiican u maamuli telefoonka aad Android? Waxaad u timid inaad meel sax ah. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idin tusin 4 kale oo weyn oo ay ku Lugood la shaqeeya telefoonada Android iyo kiniiniyada.
Sida ay magaceeda soo jeedisay, Wondeshare TunesGo waa dhan-in-mid Lugood kale oo awood leh Android (iyo macruufka) software. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u dajiyaan karaa playlists Lugood buuxa ama files warbaahinta soo xulay maktabadda Lugood in phone Android oo kiniin ah. Ka sokow, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso photos, video iyo music ka Mac si phone Android oo kiniin ah. Halkan, waxaan ku qor soo muuqaalada socodyada si aad u hesho oo aad si qoto dheer u fahamsan yahay.
Hagaagsan Lugood Library la Android on Mac 1 click.
Jiid oo hoos u soo xulay music iyo video ka Lugood in Android.
Bedelka music, waraaqaha video iyo sawiro ka Mac in ay Android.
Nadiifi Lugood nuqul files warbaahinta iyo hagaajin ID music 3 info.
La jaan qaada Android - ka Android 2.1 in 4.4.
Taageer Samsung, Google, HTC, Sony, LG iyo ka badan Android casriga ah iyo qalabka.
doubleTwist waa u dhiganta kale Lugood u software Android in wax fudud in aad wareejiso music, video iyo sawiro si telefoonka aad Android via WiFi ama cable USB. Waxaa ka shaqeeya hab fudud. Waxaad gebi ahaanba qaban kara adiga kuu gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, taasi oo dhan ayay samayn kartaa oo aan waxba ka badan tahay. Si kale haddii loo dhigo, ay diido in ay u maareeyaan music, video iyo sawiro, sida iyaga la tirtiro ama diinta audio iyo video. Taa ka sii daran, ma taageeri Android 4.3 iyo kor. Sidaas darteed, haddii aad leedahay qalab brand-cusub Android ah, sida Google Nexus 5, ma waxaad ku kalsoonaan kartaa software this.
Samsung Kies abuuray by Samsung, oo u dhiganta Samsung ah Lugood. Iyada oo ay caawimo, aad wareejin karaan xiriirada u hagaagsan, music, sawiro, video iyo podcasts iyo ka aad telefoon Samsung. Waxa kale oo ay awood aad si ay u gudbiyaan music Lugood in aad qalab Samsung. Si kastaba ha ahaatee,. Haddii aad ka walaacsan tahay ku saabsan khasaaraha macluumaadka, waad u isticmaali kartaa in gurmad qoraal, S qorsheeye, abuse wac, fariimaha, xiriirada, xisaab email, video, doorashada iyo sawiro in computer. Intaa waxaa dheer, haddii aad kaliya iska ilaawaan iPhone ama telefoonka Blackberry oo ku boodaan markabka si phone Samsung, waxaad isticmaali kartaa files raad raac ah oo iPhone iyo telefoonka BlackBerry si loo soo celiyo xogta si aad telefoon Samsung.
Fiiro Gaar ah: Waxa kaliya laga heli karaa taleefanka Samsung oo kiniin ah. Ka sokow, ay diido in ay u maamuli lahaayeen barnaamijyadooda, fariimo iyo document files. Waxa aanu ku wareejin playlists smart ka Lugood
Wondeshare MobileGo ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) waa xoog badan ah oo dhan-in-mid Android Lugood software kale. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u dajiyaan karaa music iyo playlists maktabadda Lugood iyo computer si phone Android oo kiniin ah si fudud. Ka sokow, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso barnaamijyadooda, xiriirada, sawiro iyo video iyo ka phone Android oo kiniin ah. Halkan, waxaan ku qor soo muuqaalada socodyada si aad u hesho oo aad si qoto dheer u fahamsan yahay.
Kaabta iyo soo celin telefoon Android oo kiniin ah oo kiniin ah ee 1 click.
Abaabulaan app Android, sida loo soo dajiyo, barnaamijyadooda uninstall iyo dhoofinta ee Dufcaddii, iyo guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD.
Xiriirada Transfer iyo ka Android phone / kiniin ah, oo ku milmaan tus ah.
Keydiyay oo dhan ama soo xulay fariimaha qoraalka ah sida file TXT / XML geedi xasuusta.
Maamul document files in kaarka SD iyo xusuusta telefoonka. (Oo keliya ayaa Windows sameeya)
Chine Transfer, xiriirada, fariimaha, warbaahinta iyo ka badan u dhexeeya Android, macruufka iyo Symbian. (Oo keliya ayaa Windows sameeya)
Kabsado tirtiray fariimaha, sawiro, xiriirada, audio, video, app oo dheeraad ah oo ka qalab Android aad. (Oo keliya ayaa Windows sameeya)
Fiiro gaar ah: version Mac ma ha uusan aad ku milmaan xiriirada nuqul.
Connect Android inay Mac u File Transfer
Nidaameed wax kasta beween Android iyo Mac
Best 3 Beddelka SyncMate
Video Transfer iyo Music ka Lugood in Android
Hagaagsan Lugood Library la Android
3 Siyaabaha Copy Lugood Music in Samsung
Best 3 Beddelka iSyncr
Best 4 Ka Badeli kara ee doubleTwist
> Resource > Lugood > Top 4 Lugood Badeli kara ee Android Software